Police finally compensate woman shot during August 2018 protests – Nehanda Radio
Police finally compensate woman shot during August 2018 protests
By Nehanda Radio On May 9, 2021 59,374
File picture of riot police in Zimbabwe
Home Affairs minister Kazembe Kazembe and police commissioner-general Godwin Matanga have finally compensated a Chitungwiza woman who was shot during the August 2018 post-election protests.
Loveness Chirisei was paid $1 418 703.09 after suing Kazembe and Matanga over reckless and indiscriminate shooting.
Kazembe and Matanga had been dragging their feet in complying with the order issued in July 2020 by High Court judge Justice Edith Mushore to compensate Chirisei.
Apr 29, 2022 56,627
Apr 27, 2022 26,012
CCC’s Madzibaba veShanduko arrested, badly assaulted…
Mar 17, 2022 36,481
Police ban CCC Marondera rally citing “mini car…
Mar 11, 2022 42,632
Minister claims its not duty of police to protect people…
Mar 3, 2022 30,207
They, however, moved with speed to avert contempt of court charges by paying her off on Friday, the Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) confirmed.
“Chiriseri was injured when a police officer manning a police checkpoint at the intersection of Seke Road and Delport Road shot twice at a private vehicle she was travelling in,” ZLHR said. The Standard
Godwin MatangaKazembe KazembeLoveness ChiriseiZimbabwe Lawyers for Human Rights
CCC’s Madzibaba veShanduko arrested, badly assaulted for wearing yellow
Police ban CCC Marondera rally citing “mini car rally”, lawyers challenge
Minister claims its not duty of police to protect people during elections
May 20, 2022 25,469
May 20, 2022 15,489
May 20, 2022 10,866
May 20, 2022 36,658